Maamulka Gobolka Banaadir Oo Sheegay In Dib Loo Dhigay Furitaanka Bacadlaha X/weyne | Radio Muqdisho	Wednesday, June 19th, 2013	Bogga Hore
Maamulka Gobolka Banaadir Oo Sheegay In Dib Loo Dhigay Furitaanka Bacadlaha X/weyne
Published on October 16, 2012 by Canab · No Comments · 2,038 views
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in dib loo dhigay qeybinta qololka suuqa bacadlaha degmada X/weyne ilaa 25 bisha aynu kujirno.
Shir jaraa’id oo uu maanta warbaahinta u qabtay afhayeenka maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Cusmaan ayaa waxa uu ku sheegay in dib loo dhigay waqtigii lagu balansanaa in la dhigo munaasabada lagu kala qaadan lahaa baqtiyaa nasiibka lagu dagi lahaa suuqa weyn ee Bacadlaha dagmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in ay jirto cilad farsamo waxa uuna xusay in mudo isbuuc ah dib loo dhigay, isagoona shacabka ugu baaqay in 25 bishaan Hotelka Cit Plaz lagu qaban doono munaasabada lagu kala qaadan doono baqtiyaa nasiibka.
Maxamed Yuusuf Cusmaan ayaa ganacsatada bixisay lacagta ugu baaqay maalinta ay dhaceyso munaasabada baqtiyaa nasiibka in ay horay u soo qataan dukumiintiyadii ay ka qaateen xafiiska diwaan gelin.
Bacadlaha weyn ee dagmada X/weyne ayaa la dhisay sanadkii 1981 waxaana suuqaani uu yahay mid ay dowladii hore ee Soomaaliya ka saartay dadkii horay u daganaa mudadii uu burburka jiray.